Leak Nepal	 May 28, 2021 0
अझै केही दिन उच्च बेगको हावाहुरि सहित भारी वर्षाको सम्भावना
आज मुसिकोटमा थप १५ जनामा कोरोना पुष्टी, २ जना संक्रमण मुक्त
चार्टर उडानबाट नेपाली पनि विदेश जान पाउने
आन्द्रासहित कलेजो नै पेटबाट निस्कियो ,आठ महिनाको कठै बाबू हेर्नुस्…
हार्दिक बधाई : नेपालमा आज एकै दिन यति धेरै संक्रमित कोरोना बाट निको भै घर फर्के !
Leak Nepal	 May 1, 2021 0
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२८७ जना संक्रमित निको पनि भएका छन् । नेपालमा कूल संक्रमितमध्ये २ लाख ८२ हजार ३८२ जना संक्रमित निको भइसकेका छन् । नेपालमा निको हुने दर ८५.९ प्रतिशत रहेको छ ।पछिल्लो एक दिनमा थप १९ जनाको मृ´त्यु भएको रिपोर्ट प्राप्त…
सन् २०२० का भुल्न नसकिने ११ तस्बिर
Leak Nepal	 Jan 2, 2021 0
सन् २०२० बिहीबार बिदा भएको छ। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष धेरै समयसम्म चर्चामा रहनेछ। यसबाहेक विश्वमा वर्षभरि मानिसको ध्यान आकर्षित गर्ने विभिन्न गतिविधि भए। त्यस्ता केही चर्चित गतिविधि तस्बिरमा! अस्ट्रेलियामा…
लकडाउनमा पत्निसँग झग’डा पर्दा रिसको झोंकमा ४५० किलोमिटर पैदल हिँडेपछि…
Leak Nepal	 Dec 31, 2020 0
इटालीमा एक व्यक्तिले पत्निसँग झगडा परेपछि मन र दिमाग शान्त पार्नका लागि घरबाट निस्किए । उनी पैदल हिँडेर ४५० किलोमिटर टाढा पुगे । इटालीको सामाजिक सञ्जालमा यी व्यक्ति निकै भाइरल हुन पुगे । उनलाई मानिसहरु फरेस्ट गम्प पनि भन्न थाले । फरेस्ट…
चुनाव हुन्छ, हामीले दुई तिहाइ ल्याउँछौं ओली
Leak Nepal	 Dec 26, 2020 0
काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव हुन्छ भन्नेमा दुविधा नराख्न आग्रह गरेका छन् । कतिपयले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्छ भनेर भ्रम फैलाएको भन्दै उनले त्यस्तो नहुने बताए । आफ्नो…
राष्ट्रपतिले नसच्याए सर्वोच्च अदालतले सच्याउन सक्छ
Leak Nepal	 Dec 20, 2020 0
५ पुस, काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएका छन्। यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नसच्याए गल्ती सच्याउने ठाउँ सर्वोच्च अदालत रहेको कानुनविदहरु बताउँछन्।…
क्याबिनेटमा ४ मन्त्रीको प्रतिवाद यो सामूहिक आत्महत्या हो
५ पुस, काठमाडौं, आइतबार बिहान नौ बज्दा नबज्दै मन्त्रीहरूलाई एसएमएस आयो, बिहान पौने १० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक। दिउँसो बालुवाटारमै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको थियो। त्यसैले कतिपय मन्त्रीले अनुमान…
तपाईंको यस्तो बानी, जसले कोरोना खोपको असर कम गर्न सक्छ
यतिबेला हामी कोरोना खोपको प्रतीक्षामा छौं । खासगरी रुसले तयार गरेको ‘स्पूतनिक–भि’ खोपलाई धेरैले विश्वसनीय मानेका छन् । यद्यपि उक्त खोपको पनि कतिपय साइड इफेक्ट हुने बताइन्छ । रुसका प्रधानमन्त्रीको चेतावनी, रुसमा अहिले सर्वसाधरणलाई…
सुमी मोक्तान र बिजु पार्कीले जिते ‘डान्सिङ विथ दि स्टार्स’को उपाधि
काठमाडौं, हिमालय टेलिभिजनको चर्चित शो डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ दि स्टार्स’को उपाधि सुमी मोक्तान र बिजु पार्कीले जितेका छन्। गएराति सम्पन्न भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा उनीहरुले दर्शकको सर्वाधिक भोट पाउँदै उपाधी हात पारेका हुन्।…
काठमाडौं, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकै विषयमा छलफल हुनेछ। यसअघि गत बुधबार बसेको स्थायी कमिटी…
फेरि बढ्न थाल्यो विद्युत चुहावट
Leak Nepal	 Dec 19, 2020 0
गत ४ वर्षदेखि घट्दै आएको विद्युत चुहावट चालु आर्थिक वर्षमा बढ्न थालेको देखिएको छ। चालु आवको तथ्यांकअनुसार गत असोजमा प्राधिकरणको प्रणालीबाट वितरण लाइनतर्फ १४।२९ प्रतिशत विद्युत चुहावट भयो । यो गत वर्षको असोजभन्दा २।३१ प्रतिशत बढी हो। गत…